Kushanda Kunze: Ndeapi maNyika ane Akakwirira Kwazvo Fiber Speed? | Absolut Kufamba
Monica sanchez | | vamwe
Hatichafungi nezvedu hupenyu husina internet, kwete kumba kana pafoni yedu. Kutenga mu ecommerce, teleworking, kubhurawuza masocial network, kuona mitambo yepamoyo kana kutepfenyura nhevedzano ndezvimwe zvezviitwa zvezuva nezuva izvo zvatinoita izvozvi uye kusvika kwete kare kare zvaiita kunge kure. Asi kuti ukwanise kuita zvese izvi, zvinodikanwa kuve nekumhanya kweinternet, Ndeapi nyika ane akanyanya fiber kumhanya pasirese?
Zvinoenderana neongororo yakaitwa neAmerican Ookla umo inoyera kumhanya kweinternet kubatana kuburikidza neiyo SpeedTest bvunzo, muna 2021 nyika ine yakakurumidza kumisikidzwa internet ndeye Monaco, ine avhareji kumhanya kwe260 Mbps, ichiteverwa neAsia Singapore neHong Kong ine 252 uye 248 megabytes, zvichiteerana.
Muchikamu che nhare yeInternet, ndivo United Arab Emirates iyo inotungamira iyi runyorwa nekumhanya kwema193 megabytes. Mukati mekondinendi yeEurope, Norway (iri pachinzvimbo chechina) ndiyo nyika yekutanga mukati memiganhu iyi ine avhareji yekumhanya ingangoita 167 Mbps.
Spain iri munzvimbo yakaderera muzviitiko zvese izvi. Panyaya yekumhanyisa internet mukubatana kwakasununguka, nyika yedu iri pachinzvimbo chegumi nematatu nevhareji yekumhanyisa kumhanyisa yeMbps 194. Panyaya yenhare mbozha, Spain inosvika makumi matatu nenomwe nemamabirabhiti makumi mashanu nemapfumbamwe chete. Kana iwe uchida kuziva kuti ndeipi internet inomhanya iwe kumba, tinokusiira iwe akati wandei kumhanya bvunzo.
Vazhinji vashandisi veInternet varipo munyika. Iyi nhamba yawedzera kusvika pamamirioni 4.665 muna 2020, sekureva kweInternational Telecommunications Union. Tichifunga nezvekuti huwandu hwenyika hwese huri pamazana emazana manomwe nezviuru mazana masere nemakumi mana nenomwe, vanopfuura hafu yevagari venyika (59,4%) vanoshandisa internet muhupenyu hwavo hwezuva nezuva.
Zviri pachena kuti Indaneti Ndicho fanira muhupenyu hwevanhu. Uye kana vasina kuudza mumwe nemumwe wedu, izvo zvakave zvakakosha mukuvharirwa. Kunyangwe zvaive zvekufona nemasahwira edu kana kungonakidzwa nefirimu nemhuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kushanda kunze kwenyika: ndeapi nyika ane yakakwira fiber kumhanya?
3 zvinhu zvaunofanira kutora hongu kana hongu parwendo